ကြည်နူးစေနံနက်ခင်း…………………………………. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Local Guides » ကြည်နူးစေနံနက်ခင်း………………………………….	19
Posted by ko pauk mandalay on Jun 28, 2012 in Local Guides, Photography | 19 comments
1 နံနက်ခင်း အရုဏ်တက်ရေပြင်ကို သက်ဆင်း လှပခြင်းတွေနဲ့ဖွဲ့တည်ထား တဲ့ရောင်စဉ်
2 အလင်းနိုးထ ရောင်ခြည်ဖြာကျကမ္ဘာမြေလှပ…………………………………………..
3ဟိုးအဝေးမှာရှမ်းရိုးမ ၀ိုးတ၀ါးရေပြင်မှာလှိူင်းကြက်ခွပ် ဆော့ကစား……………………..
4 မိူင်းညို့ ဆိုင်းဆို့တဲ့မိုးတိမ်ဝဠာတစ်ခွင်အုံ့မိူင်း လွမ်းစေခိုင်းရောသလား…………………
5 မိူင်းရာမှကြည်လင်ပြာလွင်သော အလင်းစကြက်ခွပ်ထတဲ့ရေပြင်မြင်ရသူ လန်းစိတ်ရွှင်
6 တိမ်ပြာသောနေ့ဆိုတဲ့ ရှေးရှေးက သီချင်းလေးရင်ထဲမှာ သတိရမိတော့ လမ်းသွားရင်းတောင်လေချွန်မိတယ်(တိမ်ပြာသောနေ့တွင်အသဲများဘ၀င် သာယာလန်းဆန်းကြည်ရွှင်)
7 အလင်းစက် က ရေပြင်ပေါ် ခပ်သော့သော့လေပြေဆော့ တော့ လှိုင်းကလေးနော့ဗေဒါပင် ကတော့ ခေါင်းလေးမော့………………….
8 နှစ်ရောင်စပ် ကန်ရေပြင် ကြည်နူးဖွဲ့ဆင် အဝေးမှာ စိမ်းလွင် တောအုပ်ကလေးအသွင်
10 ပိုက်မပါ ကွန်မပါ ငါးမျှားချိတ်မပါ လက်နဲ့ဘဲဖမ်းမယ့် ကိုတံငါ
11 အငြိမ်သုံး အရွှေ့ နှစ်………………….
12 မြေကမ္ဘာမစောင်း ထန်းပင်လဲမစောင်းဒါဆို ကျနော်အမြင်စောင်းတာဘဲဖြစ်မယ်
မနက်မနက်နိုးစက်ပေးထားပြီး အအသံမည်ပေမယ့် အိပ်ယာက မထ။
ကျန်ာက ဆက်အိပ်လို့ရပေမယ့်မဒမ်ပေါက်က ဆက်အိမ်မရတော့
“အိပ်ယာက မထင်ချင်ရင် နှိုးစက်မပေးနဲ့” ဆိုပြီး ၀ါဒသဘောထားကြေညာချက်တွေထုတ်ပါတယ်။
ဒီလိုဘဲထမယ်လုပ်လိုက် မထဘဲပြန်အိပ်လုပ်လိုက်တာ ရက်20ကျော်သွားပါတယ်။
အဲဒါနဲ့မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး တစ်ည စောစောအိပ်။
အဲတော့လဲ ကျန်ာသိပ်အားမစိုက်ရဘဲ မြန်မြန်လျှောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။
နေထွက်ရာဘက်နဲ့အလျားလိုက်လျှောက်ရတဲ့ နေရာလဲရောက်ရော အာရုံတက်အလင်းရောင်တွေက
လှပစွာ ရေပြင်ပေါ်ကို ကျ။
လေဆော့ တော့လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေ ထနေပုံက တကယ်ကိုလှပ ပါတယ်။
လေဆော့တော့ ကန်ရေပြင်က လှိုင်းတွန့်လေးတွေဖြစ်လို့အတန်းလိုက်ကြီးကမ်းစပ်ကိုအပြေးလာ။
ဗေဒါဒိုက်ပင်တွေကလည်း လှိုင်းပုတ်တော့ တအိအိ။
ကျနော်အကြာကြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာက တော့ အနောက်မြောက်ဘက်ကန်စပ် ချိုချိုကဖေးနားမှာပါ။
ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်ကျောင်းဆောင်လေးက လည်းအထီးတည်း။
ဟိုး အရှေ့ဘက်က ကန်စပ်မှာ ငါးမျှားချိတ်မပါ၊ပိုက်ကွန်မပါ အုပ်ဆောင်းမပါတဲ့ တံငါသည်လေးကလည်း
ဟိုးအဝေးက ပြည်ကြီးမွန်ရော ဆောက်လက်စသစ်သားစင်ကြီးရော ရေလည်ခေါင်က ကျောင်းဆောင်လေးက ငြိမ်သက်။
လှုပ်နေသူကတော့ လှိုင်းထတဲ့ရေပြင်ရယ် ငါးရှာနေတဲ့ ကိုတံငါရယ် လက်ဆော့တဲ့ကျနော်ရယ်ပေါ့။
ဘယ်လိုဘဲပြောပြော ကျနော်နဲ့ အတော်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ ကန်ရေပြင်နံနက်ခင်းလေးက တော့လှပလျှက်ပါဘဲ။
မောင်ပေ says: မကျေနပ်ဘူး
မောင်ပု အကြိုက်ကြ ထည့်ပေးတယ်
မောင်ပေ့ အကြိုက်ကြ မပါဘူး
ကိုရင်မောင် says: ခုလိုလှပတဲ့နံက်ခင်းမျိုးမတွေ့ရတာကြာပါပေါ့……
မမ အညာသူ says: ရိုက်ချက်ကတော့
mamanoyar says: ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတာ
ဘယ်ကိုလွမ်းလို့ လွမ်းရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးးးးးးးးး
mocho says: နံပါတ် ၁ ကိုကြည့် ရတာ အရောင် တွေ စုံ တဲ့ သက်ငြိမ် ပန်းချီ ကားတစ်ချပ် ကို ကြည့် ရ သလို ပါပဲလား ။မနက် ခင်း ရဲ့ သဘာဝ အလှ တွေ ကို မခံ စားရတာ အတော် ကြာပါပြီ။ကျမလည်း လေး ပေါက် နဲ့ အတူတူပဲ … မနက် ၊မနက် လမ်းထ လျှောက်မယ် ဆိုပြီး နှိုးစက် ပေးပြီး မထလို့ အဲလို အပြောခံရတယ်။
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: မောနင်း….
နံနက်ခင်း ရဲ့ အလှတရားတွေနဲ့….
ပင်လယ်ပြင် နှင့် ထွန်းသစ်ရောင်ခြည်..
ကြည်ဆောင်း says: ကြည်ဆောင်းလဲ တူမ(10) တန်းတနှစ်လုံး နှိုးစက်အစောကြီးပေးထား၊ သူကမထ ၊ ကိုယ်ကအိပ်မရနဲ့ တနှစ်လုံးလုံး ဒုက္ခခံခဲ့ရတာ သတိရမိပြီး မဒမ်ပေါက်ကို စာနာမိပါရဲ့ လေးပေါက်ရေ …
နှစ်ရောင်စပ်ကန်ရေပြင်လေးကို ကြည်နူးနှစ်သက် အားပေးသွားပါကြောင်း ။
Nyein Nyein says: ပန်းချီဆန်ဆန် ပုံလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်။ ပုံအောက်က ကဗျာဆန်ဆန်စာလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်။
လေးပေါက်ရေ…….. ဓာတ်ပုံလေးတွေကူးသွားတယ်နော်။ ကူးခွင့်ပြုပါ။
မဂွတ် ထော် says: အရမ်းလှတယ် ပုံလေးတွေကြည့်ရတာကြည်းနူးစရာပဲ
may flowers says: လေးပေါက်ရေ အားပေးသွားပါတယ်……..ပုံ-၆ နဲ့နောက်ဆုံးပုံ -၁၂ ထန်းပင်လေးတွေကိုသဘောကျတယ်။
ဖိုးထောင် says: အူးပေါက် မရောင်းချင်ချင် ရောင်းချင်ချင် အဲဒီပုံတွေအကုန်လုံး ကျနော့်ရောင်း ရော့ဓါတ်ပုံဖိုး ၂ ကျပ် ပေး ၁၀ ပြန်အမ်း သွားတော့မယ် ကစ်လိုက်ဦးမယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုဖိုးထောင်ရေကျေးဇူး
water-melon says: နေသာသာနေ့ တစ်နေ့ ဆန်းဒေးမှာကွယ်
တူများတွေ လက်ဆက်ကျတယ် ရှစ်တလေးရယ်
ဒူ တန် ဒူ တန်
များလေ အူးသေးကို အရမ်းအားကျတာဘဲ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အိမ်စောင့်နတ်က နှင်တော့ အိမ်ကို အိပ်ချိန်ကလွဲရင်မကပ်နိုင်
ဆိုင်စောင့်နတ်က နှင်တော့ အလုပ်ထဲမှာဖင်မမြဲ
မြို့စောင့်နတ်က နှင်တော့ သူများမြို့ရွာရောက်
အင်း ဂေဇက်စောင့်နတ်က ဘယ်ချိန်များနှင်မလဲလို့ တွေးပြီး ပူနေရတာနော်
အလင်းဆက် says: အိုး……လှလိုက်တဲ့ပုံတွေ…။
အား..ကျ လိုက်တာ ဗျို့ .။
snow white says: မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမင်းသတိရရင် တစ်ခေါက်သာလှမ်းလာခဲ့စေချင် ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသော နံနက်ခင်းလေးပါ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ပါဘူးအေ
ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း မင်းသတိရ ရင် အမှတ်တရနေရာဟောင်းမင်းအရောက်သာလာစေ့ချင်
Mလုလင် says: နံပါတ် ၁ ပုံ အတွက် လက်မ တစ်ချောင်း ပါဗျို့  ………။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကောင်းဆို မင်းပြောသလို ကွက်လပ်မကျန်အောင် ဂရုစိုက်ရိုက်တာလေ လုလင်ရဲ့
Comments By PostComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Ma Ma - အလင်း ဆက်ရွာသူ/သားများ အတွက် - Munetez - Munetezသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Ma Ma - Silver Twigနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - Munetez - kaiရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - kai - garudaသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - padonmar - မောင် ပေ၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaအတု - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67417 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66832 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59081 Kyats )MaMa (57917 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...